किङ्ग टिजर रिलिज: को हुन् त किङ्ग - निखिल कि अनुप ? | Glamour Nepal
किङ्ग टिजर रिलिज: को हुन् त किङ्ग – निखिल कि अनुप ?
निखिल उप्रेती अभिनित चलचित्र “किङ्ग” को टिजर रिलिज गरिएको छ। करिव एक मिनेट लामो टिजरमा निखिल संगै बेनिषा हमाल र अनुप बिक्रम शाहीलाई फ़िचरिङ्ग गरिएको छ। टिजरमा शमाबेश गरिएको एक्शन दृश्य र गीतको दृश्यहेर्दा चलचित्र त्रिकोणात्मक प्रेम कथामा आधारित हुन सक्ने अनुमान सहजै लगाउन सकिन्छ।
चलचित्र ‘भैरव’ बाट डेब्यु निर्देशन र अभिनयमा पुनरागमन गरेका निखिल उप्रेतीको पुनरागमन पछिको यो तेस्रो चलचित्र हो। यस अघि उनको करिव १८ महिना अघि चलचित्र ‘लुटेरा’ रिलिज भएको थियो। चलचित्र ‘लुटेरा’ हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।
पुस २९ गते रिलिज मिति तय गरिएको चलचित्रलाई सवीर श्रेष्ठले निर्देशन गरेका हुन्। जगन श्रेष्ठको प्रस्तुतिमा जयन श्रेष्ठ निर्माता रहेको चलचित्रमा रुपा राना, प्रज्वलसुजल गिरी र जगन श्रेष्ठलगायतका कलाकारहरुले अभिनय गरेका छन्। “किङ्ग” को टिजर हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।
फोटो ग्यालरी – नेपाली फिल्म किङ्ग – CLICK HERE
दुबईमा आयोजना हुने नेफ्टा अवार्डकालागी कलाकारहरुको तयारी । फोटो फिचर
मनको कुरा सुनाउदै ओम सुनार – म्युजिक भिडियो